आस्था राउतलाई अब के हुन्छ ? ‘सेफल्यान्डिङ’को खोजी – Harek Samachar
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा गायिका आस्था राउतविरुद्ध प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा जाहेरी दर्ता गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासनमार्फत आस्थाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि प्रहरीले लिएको छ ।
कानुनी भाषामा भन्ने हो भने आस्था हाल फरार छन् । तर उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि भारतमा छन् । बुधबार विमानस्थलबाट झापा जाने क्रममा राउत र प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठबीच सुरक्षा चेकजाँचका क्रममा विवाद भएको थियो ।
सुरुमा विवाद बाहिर आएन । तर आस्थाले झापा पुगेपछि फेसबुक लाइभ गर्दै आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै भिडियो जारी गरिन् । भिडियोमा पनि प्रहरीलाई गालीगलौज गरेको भन्दै उनीमाथि छानबिन थालिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीले आस्थाको व्यवहार मर्यादित नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि आस्थाले कतिपय शब्द आवेशमा बोलेको भन्दै माफीसमेत मागिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा आस्था प्रकरणले राम्रै चर्चा पायो । प्रहरी आस्थाको विमानस्थलको व्यवहारभन्दा पनि फेसबुकमा उनले जारी गरेको भिडियोबाट आक्रोशित बनेको थियो ।
आस्था भारतबाट फर्केकी छैनन् । उनीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ ।
प्रहरीभित्रै एकथरीको तर्क छ–प्रहरीले मुद्दै चलाउन नहुने । अर्कोथरीको तर्क छ–सेलिब्रेटी भन्दैमा मनलाग्दी गर्न कहाँ पाइन्छ ?
आस्थाले फेसबुक लाइभमार्फत अर्को भिडियो जारी गरेर माफी मागिसकेकी छन् ।
परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार अब आस्थाको मुद्दा कानुनीरुपमै किनारा लाग्छ ।
उनले भने,‘‘प्रहरीको अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ । आस्था आइसकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनको बयान हुन्छ । बयान सकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गरिनेछ ।’’
एक वर्षसम्म सजाय हुने मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला सुनाउन सक्ने एसएसपी सुवेदी बताउँछन् ।
यस्तोमा दुई विकल्प छन्–साधारण तारेखमा छाड्ने वा धरौटी लिएर छाड्ने । सुरुमै जेल भने पठाइँदैन । दुई विकल्पमा जुनसुकै आदेश भए पनि मुद्दाको फैसला भने केही समयभित्र सुनाउनुपर्छ ।”
एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘‘यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारको कुरा हो । आस्था राउतलाई साधारण तारेखमा छाड्ने सम्भावना बढी छ । उनले गल्ती स्वीकारेर माफी पनि मागिसकेको अवस्थामा यो विषय धेरै तन्किन्छ जस्तो लाग्दैन ।’’
धरहरा होइन ‘भ्युटावर’
दामनको होटलमा आठजना भारतीय पर्यटकको मृत्यु